कहिले काँही जिस्काउनेहरु आउँछन – सडक किनारमा भेटिएकि हँसीली ‘उखुवाली’को कथा – भिडियो हर्नुस् – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > कहिले काँही जिस्काउनेहरु आउँछन – सडक किनारमा भेटिएकि हँसीली ‘उखुवाली’को कथा – भिडियो हर्नुस्
कहिले काँही जिस्काउनेहरु आउँछन – सडक किनारमा भेटिएकि हँसीली ‘उखुवाली’को कथा – भिडियो हर्नुस्
admin February 10, 2020 जीवनशैली, भिडियो, समाचार, समाज	0
बेरोजगारकाे चपेटामा चुर्लुम्म डुबेकाे नेपाल, हरेका ब्यक्ति जन्मनु भनेकै विदेश जानैका लागि हो भन्दा अतिसयोक्ति नहाेला । देशमा भएकाे चरम बेरोजगारीले नेपालका युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । गाउँघरका बाँझा जग्गाहरू देख्दा लाग्छ अब देशमा केहि गर्न सकिदैन । गाउँघरका प्राय युवाहरू विदेशिदै गइरहेका कारण पनि गाउँघरका जमिन बाँझिएर उदासिएका छन् । फेरि पनि गाउँबस्तीका कलिला युवाहरू विदेशिन बाध्यात्मक रहर गर्छन् ।
यति भनिरहँदा यहाँ एक जना १८ बर्षिया सुस्मिता भने विहानकाे कलेज पढ्छिन र दिउँसोमा धादिङकाे सातकिल्ला स्थित राजधानी छिर्ने मुलसडक किनारमा उँखुका भारीहरू ठड्याएर उभिएकि छिन् । स्थायी घर पालङ दामन बताउने यी सुस्मिता कुँवर दिउँसोको समयमा प्राय सडककिनारमै हुन्छिन् ।
नेपालका सबै जसो ठाउँहरूबाट राजधानी छिर्ने गाडीहरूमा सवार यात्रुहरूले सडक किनारमा लहरै उभिएका उखुहरू देखेपछि मुखमा थुक त निकाल्छन पक्कै । तर कतिपय समय मिलाएर गाडी रोकेर उखु खाने र लैजाने समेत गर्छन् । यहि सिलसिलाले सुस्मिता र सुस्मिता जस्त सडक किनारमा दिनभर जसो उखु बेचेर यात्रुहरूकाे मुख रसिलो बनाउँदै आफ्नो परवारकाे पनि घरखर्च चलाइरहेका प्रसस्तै भेटिन्छन् ।
सुस्मिताकाे केहि यतिबेला सिजन छ, भन्छिन कहिलेकाँही त भ्याईनभ्याई हुन्छ । उखु खान आउनेहरू कतिले त जिस्कयाउँछन् पनि तर उनि हँसिली अनुहारकि हाँसेरै टारिदिन्छिन् । र फेरि उनकाे उखु बेच्नतिर लाग्छिन् । यतिबेला सिजन छ, उखुकाे राम्रो ब्यापार छ, मनग्गे कमाउन नसकेपछि कमाईमा सन्तुष्ट हुदै भन्छिन् – घरखर्च चल्छ । १८ बर्षमै उनलाई यस्तो व्यवसाय भने उनकि आमाले सिकाएकि भन्दा फरक पर्दैन किनकी उनकि आमाले पनि यसरी नै उखु बेच्ने गर्थिन् ।
अहिले धादिङकाे सातकिलामै कोठा भाडामा बसिरहेका सुस्मिता र सुस्मिताकाे परिवारमा बुवाआमा, दाई, दिदि र भाई समत रहेकाे बताउँछिन् । दिदीबहिनी मिलेर बेचेकाे उँखुकाे व्यापरले विदेश जाने भन्दा बढि नै कमाई भएको सुनाइन् । यसैक्रममा उनि भन्छिनः केहि गर्न सके विदेश जानु पर्दैन । यहि गाउँघरमा केहि सिप र सानो लगानीले पनि सन्तुष्ट हुने गरि कमाउन सकिन्छ ।
कति कमाउँछिन दिनमा? जान्नका लागि कृपाय भिडियो हेरिदिनुहाेला र सेयर पनि गरिदिनुहोला ।
ड’र र ध’म्की मा हिजो कुरा लुकाएकि यी नानीले सत्य बाहिरियो रुदै भनिन सत्य! न्याय खोइ मलाइ? (भिडियो सहित)